प्रवासी मजदुर संगठनको सदस्य किन हुने ? | News Nepal
प्रवासी मजदुर संगठनको सदस्य किन हुने ?
दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नुपूर्व विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाबाट कोरियामा विरोध प्रदर्शन, आन्दोलन र सभासम्मेलनहरु गर्न पाईदैन । त्यस्तो काम गरेमा सिधै नेपाल फर्काइदिन्छन् भन्ने कुरा व्यापक सुनेको थिएँ । त्यस्तो विभिन्न राजनीतिक दलको हकमा होला तर मजदुर संगठनको हकमा त्यसो हुदैन किन कि म अहिले आफै प्रवासी मजदुर संगठन को सदस्य छु । बिभिन्न कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन र र्‍यालीमा सहभागी रहेको छु । हामीलाई कसैले पनि आफ्नो हकअधिकारको लागि लडाई लड्नबाट बन्चित गराउन मिल्दैन । मैले यसो भन्नुको कारण अहिले पनि हाम्रो मानसिकता भनेको कोरियन सरकारको बिरोध गर्‍यो या मजदुर संगठनमा आवद्ध भएमा नेपाल पठाई दिन्छ भन्ने मानसिकताले होला । हामी कार्य स्थलमा जतिसुक्कै गाली/गलोच कुटपिट र बिभिन्न प्रकारले काम गर्ने असमर्थ भए पनि चुपचाप सही बस्छौ ।
वास्तममा त्यसको दोषी हामी आफै हुन्छौ । हामी जति चुप लागेर बस्यो त्यती नै हामीलाई यहाँका साहु तथा सिनियरहरुले च्यापेर राख्दा रहेछन् । कुनै कुनै आस्थामा फेरि हाम्रै एक आद नेपाली अगुवाहरुबाट जानकारी लिन खोजेमा कोरियामा बिरोध गर्न पाउदैन साहु राम्रो छैन भने चुप्प लागेर सहनु को विकल्प छैन भन्नु हुन्छ । हो, रिलिज दे भनेर सिधै भन्न न मिले पनि आपूmमाथि हुने अत्याचार को लागि आवाज उठाउन पाउनु हाम्रो अधिकार हो र यसैका लागि एक जुट भएर आवाज उठाउन मिल्ने थलो भने कै MTU नै हो । जुन कोरियन सरकारबाट मान्यता प्राप्त एक मात्र प्रवासी मजदुर संगठन हो ।
यहाँका केहि ब्यक्तीहर बाट झुटो प्रचार पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । यो सब पैसा उठाएर खानको लागि मात्र खोलेको संगठन हो । यिनीहरुकै विरोध कै कारणले हाम्रो कोटा कम भए को हो ।
वास्तममा यो शतप्रतिशत मिथ्या हो । हरेक महिना उठने लेबीले अफिसमा काम गर्ने एक जना कर्मचारीलाई सेलरी दिन पनि पुग्दैन । कोरियामा मजदुर संगठन दर्ता भै सकेपछि प्रत्येक बर्ष आयब्ययको हिसाब निवार्य रुपमा कोरियाको बित्त्व बिभागमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै सदस्यता सुल्क सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउदैन र इलिगलको या मजदुर संघसंगठनका कारण कोटा घट्ने भन्नू भन्दा पनि या अहिले कोरिया को आर्थिक मन्दीका कारणले र साहुले नेपाली कामदार कम डिमान्ड गरे को भएर कोटा कम भएको हो र MTU ले हमेसा प्रवासी मजदुर कोटा बढनु पर्छ र ज्यादा भन्दा ज्यादा मजदुर कोरिया आउनुपर्छ भन्ने पक्ष मा हुनुका साथै सधै मजदुरको हकहितको लागि लड्ने सबै माझ छर्लङ्ग नै छ । यदी KCTU र MTU जस्ता मजदुर सगठनले माग नउठाएको भए सायदै हाम्रो ‘बेसिक सेलरी’ प्रत्येक बर्ष ‘जनवरी’बाट बढ्ने नै थिएन होला । यहाँका साहु र सरकारले एक पैसा पनि ‘सेलरी’ बढाउन मान्दैनन् ।
जुन ‘इलिगल ‘बस्ने कुरा छ । त्यसको लागि यहाँको साहु र कथकतझ नै पूर्ण तया दोषी छन् । आपूm खुसी कम्पनी चेन्ज गर्न न पाउनु र ३ बर्ष ‘भिषा प्लस’ नगर्नु यसका मुख्य कारण हुन् । ‘इलिगल’ हुन मा दोष चैं यता को system र साहुको हुने आरोप चै हामीलाई लाग्ने र जवरजस्ती स्वदेश फिर्ता पठाई दिने त्यसैले यो सबै समस्याबाट निदान पाउन अहिलेको काम गराउने system मा सुधार गरेर wps system लागु गर्नु जरुरी छ । wps system लागु भएमा मजदुरको काम गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिस्चित हुन्छ । यी सबै अधिकार प्राप्ती लागि मजदुर हकहितका लागि सधै सङ्घर्शरत MTU को सदस्य भइ आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
मधुसुधन ओझा /दक्षिण कोरिया
प्रकाशित मिति : 2016-08-27
राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकालका लागि असार ४ गते गोलाप्रथा
काठमाडौं २७, जेष्ठ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल टुंगो लगाउन असार ४ गते गोलाप्रथा गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित सहभागी...
पार्टीलाई पहिलो बनाएर मात्र विश्राम लिन्छु : देउवा
डडेल्धुरा २७, जेष्ठ । नेपाली काँग्रेस डडेल्धुराले आयोजना गरेको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसलाई पुरानै...
कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबाट गणित हटाइइयो, हटाउदा कहाँ-कहाँ पर्छ असर ?
काठमाडौं २५, जेष्ठ । कक्षा ११ र १२ बाट गणित हटाइएको छ । गणित विषय हटाइएपछि यसको विरोध चारैतिर भइरहेको...
काबुल, २४ जेष्ठ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले बिहीबार अस्थायी युद्धविरामको घोषणा गरेको समाचार छ । उहाँले इद अल फित्र...
मन्त्री यादवले भने, मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुभयो खड्कालाई धन्यवाद
काठमाडौँ २४, जेष्ठ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएकोमा...
वासिङटन, २३ जेठ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूसँग आफैँलाई माफी दिने पूर्णअधिकार भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो कार्यकारी...
एसएसपी खत्रीलाई झुम्का कारागार लगियो किन ?
काठमाडौँ २२, जेष्ठ । सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा निलम्वित एसएसपी श्याम बहादुर खत्री गोरे रहेको कारागारमा बस्न नमानेपछि सुनसरीस्थित क्षत्रीय कारागार...
काठमाडाैं २१, जेष्ठ । ग्वाटेमालामा सोमबार भएको विशाल ज्वालामुखी विष्फोटमा परेर २५ जनाको मृत्यु भएको छ । ज्वालामुखी विष्फोटबाट सयौं...
भीमदत्तनगर, २१ जेष्ठ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरै महिला मानव बेचबिखनको शिकार बनिरहेका बेला कञ्चनपुर बिचौलिया (दलाल)को लागि सहज नाका...